कांग्रेस बाँकेमा पालिका अधिवेशन जारी, राप्ती सोनारीमा विवाद :: नारायण खड्का :: Setopati
कांग्रेस बाँकेमा पालिका अधिवेशन जारी, राप्ती सोनारीमा विवाद
दाङ, मंसिर २
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत बाँकेका आठ स्थानीय पालिकामध्ये बिहीबार तीन पालिकामा नेतृत्व चुन्न मतदान जारी छ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भने मतदान केन्द्रको विषयमा विवाद हुन मतदान सुरू हुन सकेको छैन।
जिल्ला निर्वाचन समितिले पालिकाको वडा नं. ३ साइपुरस्थित साल्टर भवनमा मतदान तोकिएको थियो। पार्टी भित्रको संस्थापन पक्षले निर्वाचन समितिले तोकिएकै स्थानमा मतदान हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। तर, संस्थापन पक्षइतर अर्को समूहले उक्त मतदान केन्द्र उपयुक्त नभएको भन्दै विवाद झिकेको हुँदा मतदान सुरू हुन नसकेको स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
असन्तुष्ट पक्षले साइपुरमा नभई वडा नं. २ को अगैयामा मतदान केन्द्र तोक्नुपर्ने भन्दै विवाद झिकेको हुँदा निर्वाचन सुरू हुन नसकेको जिल्ला निर्वाचन समितिका एक पदाधिकारीले बताए।
‘हामी अहिले पनि साइपुरमै छौं र विवाद मिलाउने प्रयास जारी छ,’ उनले भने,‘सकभर हामी मिलाएर निर्वाचन आजै गराउन प्रयास गर्नेछौं।’
यो गाउँपालिकामा सभापति पदमा २ जनाका बीचमा प्रतिस्पर्धी छन्। उपसभापति पदमा ४ जना, सचिवमा ४ र सहसचिवमा ४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता गरेर मैदानमा उत्रिएको मतदान अधिकृत प्रेमप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
खुला सदस्यतर्फ १८ (पुरूष) का लागि २८ जना, ९ जना (महिला) सदस्यका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
स्रोतका अनुसार वडा कात्तिक अन्तिममा भएको वडा अधिवेशनका क्रममा वडा नं. २ को मतदान केन्द्र अगैयामै राखिएको थियो। त्यो निर्वाचन क्रममा चार जना नेकपा एमाले निकट युथ फोर्सका युवाले पनि मतदान गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
‘युथ फोर्सका चार जना युवाले आफ्ना अभिभावकको नामबाट मतदान गरेको पुष्टि भइसकेपछि निर्वाचन समितिले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि यसपटक मतदान केन्द्र वडा नं. ३ मा सारेको हो,’ एक अधिकृतले भने ‘ फेरि अगैयामा लगेर धाँधली गरेर निर्वाचन जित्न प्रयत्न गर्नेहरूले किचलो झिकेका हुन्।’
कहाँ-कहाँ निर्वाचन जारी छ ?
योबाहेक बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा मतदान जारी छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सभापति पदमा तीन जनाका बीचमा प्रतिपस्पर्धा हुन लागेको छ। जिल्लाका आठ पालिकामध्ये नेपालगञ्जकी उपमेयर उमा थापा मगर सभापति पदमा मैदानमा भिडेकी एक्ली महिला हुन्।
उनी संस्थापनइतर खेमाबाट निर्वाचनमा होमिएकी छन् भने थप दुई प्रतिस्पर्धी प्रशान्त विष्ट र विनोद रिजाल पार्टीभित्र संस्थापन पक्षधर मानिएका छन्।
नेपालगञ्जमा दुई उपसभापति पदमा ६ जना, २ सचिव पदमा ५ जना र २ सहसचिव पदका लागि ६ जनाको बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको नेपालगञ्जका मतदान अधिकृत सुभास गौतमले जानकारी दिए।
नेपलागञ्जमा सदस्य पदमा ५९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
नेपालगञ्जस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा बिहान ९ः३० बजेदेखि मतदान जारी छ।
त्यस्तै, कोहलपुर नगर सभापति पदमा २ जना, उपसभापतिमा ४ जना, सचिवमा ४ र सहसचिव पदका लागि ४ जनाको बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। मतदान अधिकृत प्रभाकर भट्टराईले सबै सदस्य पदमा पनि उम्मेदवारी परेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकामा सभापति पदका लागि तीन जनाका बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। उपसभापतिमा ४, सचिवमा ४ र सहसचिवमा ४ जना नेतृत्वको लागि मैदानमा उत्रिएको मतदान अधिकृत गणेशप्रसाद थारुले बताए।
जिल्लाका आठ पालिकामध्ये चार पालिकामा बुधबार नै सबै पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको थियो।
डुडुवा गाउँपालिकामा सभापति विजयकुमार यादवसहित सबै पदमा एक/एक जनाको उम्मेदवारी दर्ता भए पनि उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएका कारण कार्यसमिति पदाधिकारी सबैलाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिएको मतदान अधिकृत हरिप्रसाद सुवेदीले बताए।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकामा निर्विरोध कार्य समिति पदाधिकारी निर्वाचित भएको छ। मतदान अधिकृत गोपाल गिरीका अनुसार नरैनापुर गाउँपालिका सभापतिमा मेराज अहमद खाँ, उपसभापति नितेशसिंह मौर्या र रामबिलाश मौर्य, सचिवमा धर्मेन्द्र यादव र रामचन्द्र यादव, सह–सचिव जगदिशप्रसाद कलवार र मन्नान अहमद अन्सारीसहित ३७ जनाको कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको हो।
त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकामा सभापतिमा रमेश सिजाली, उपसभापतिमा इरफान अहमद खाँ र भीमबहादुर सुनार, सचिवमा अर्जुनकुमार प्याकुरेल र रामजीप्रसाद पौडेल, सहसचिवमा मोहम्मद वकिल खाँ र सरिफ खाँ निर्विरोध निर्वाचित भएको मतदान अधिकृत महारूप जैसीले बताए।
यो गाउँपालिकाको ४४ सदस्यीय कार्य समिति पदाधिकारी सबै निर्विरोध भएको उनले बताए।
खजुराबाट प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिध (अपांग) कोटामा गणेशबहादुर बोहरा क्षेत्री निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकामा उपसभापति पदमा मात्रै निर्वाचन भइरहेको छ। अन्य सबै पदमा बुधबार नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको थियो।
मतदान अधिकृत पवन गुप्ताका अनुसार २ जना उपसभापति पदमा ३ जनाको उम्मेदवारी परेपछि बिहीबार बिहान तोकिएको समयदेखि मतदान भइरहेको छ।
यहाँ सभापति पदमा दयाराम यादव (अहिर), सचिवमा कुलराज जोशी र टिकानाथ यादव, सहसचिवमा रत्नबहादुर थापाक्षेत्री र हमिद अलि हलवाई सर्वसम्मत रूपमा चयन भइसकेका छन्।
यो पालिकामा १८ जना खुला सदस्य र समावेशीबाट ८ जना सदस्य पनि सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २, २०७८, ०३:०२:००